Moosend: Ny endri-barotra rehetra momba ny marketing dia ny manangana, manandrana, manara-maso ary mampitombo ny asanao | Martech Zone
Lafiny iray mahaliana amin'ny indostria misy ahy ny fanavaozana mitohy sy ny fidinan'ny vidin'ny fidiram-bola ho an'ireo sehatra fanaovana automatisation tena be pitsiny. Ny toerana nandanian'ireo orinasa an'arivony dolara (ary mbola anaovany) ho an'ny sehatra lehibe… ankehitriny dia nidina be ny vidiny raha toa ka mihatsara hatrany ireo sanganasa.
Vao haingana izahay no niara-niasa tamin'ny orinasa mpanatontosa lamaody orinasa izay vonona hanao sonia fifanarahana ho an'ny sehatra iray izay handoa azy ireo mihoatra ny antsasaky ny iray tapitrisa dolara ary nanoro hevitra azy ireo izahay hanohitra izany. Na dia manana ny endri-javatra azo ovaina rehetra aza ny sehatra, ny fahaizany mampiditra, ary ny fanohanana iraisampirenena… vao nanomboka ny orinasa, tsy nanana marika akory, ary mivarotra ao Etazonia fotsiny.
Na dia mety ho vahaolana vonjimaika aza ny fananganana ny orinasan'izy ireo, dia hitanay izy ireo vahaolana amin'ny ampahany kely amin'ny vola izay tsy mila ezaka firy hampiharina. Izany dia hanampy amin'ny fivezivezena amin'ny orinasa, hanampy azy ireo hifantoka amin'ny fananganana ny marika, ary hanampy azy ireo hampitombo ny vola miditra… nefa tsy hiato. Tsy ilaina intsony ny milaza fa faly ny mpampiasa vola.
Moosend: Marketing amin'ny mailaka sy automatisation marketing
Ho an'ny orinasa antonony mitady hampiditra taranaka mitarika, manangana sy mamoaka mailaka mora foana, ary manangana dia automatique marketing, ary mandrefy ny fiantraikany… ho hitanao izay ilainao rehetra Moosend.
Ny sehatra dia efa misy mponina alohan'ny modely mailaka mamaly sy tsara tarehy an-jatony ary ny mandeha ho azy ilainao hanombohana amin'ny ora fa tsy volana.
Moosend: Tariho ary alatsaho ny mpanamboatra mailaka
Ny tonian-dahatsoratry ny drag & drop-mora ampiasain'i Moosend dia manampy ny olona rehetra hamorona taratasy matianina toa tsara amin'ny fitaovana rehetra, miaraka amin'ny fahalalana HTML zero. Miaraka amina modely havaozina an-jatony azo isafidianana, hitafy fahombiazana ny fampielezana mailaka ataonao.
Moosend: ny fivezivezena amin'ny automatisation marketing
Moosend manampy anao hamorona workflows mandeha ho azy miavaka marketing izay mitondra ny tahan'ny fiovam-po. Ary manolotra efa vonona maromaro izy ireo fomba fanamboarana hanombohana anao… ao anatin'izany ny:
Fampatsiahivana mandeha ho azy
Fampandehanana mitarika fitarihana
Fanomezana automatique VIP
Ny automation tsirairay avy dia manolotra fikafika, fepetra ary fihetsika hananganana fanovana automatique efa misy na hananganana ny anao manokana. Ny anao dia manana toe-javatra mitarika maro, mailaka miverimberina, elanelam-potoana marina, ary / na fitenenana, mamerina statistika, mizara onjam-piasa, manampy naoty, manambatra làlana ary manamarina ireo staty isaky ny dingana misy ny dalambe.
Browse Moosend Recipe
Moosend: fampidirana ecommerce
Moosend manana fampidirana teratany an'i Magento, WooCommerce, ThriveCart, PrestaShop, OpenCart, CS-Cart, ary Zen Cart.
Ankoatry ny automatisation e-commerce mahazatra toy ny kalesy fiantsenana nilaozana workflows, izy ireo koa dia manolotra tolo-kevitra mifototra amin'ny toetr'andro, tolo-kevitra momba ny vokatra manokana, ary tolo-kevitry ny vokatra tarihin'ny AI. Azonao atao koa ny mampizara ny mpihaino anao amin'ny tsy fivadihan'ny mpanjifa, ny fividianana farany, ny mety hividianana indray, na ny mety hampiasana kupon.
Moosend: Pejy fitobiana sy mpanorina endrika
Toy ny mpanamboatra mailaka azy ireo, Moosend dia manolotra mpanamboatra pejy fitobiana mitambatra izay manana ny endrika sy ny fanarahan-dia rehetra antenainao hahamora ny zavatra. Na, raha te hampiditra endrika ao amin'ny tranokalanao manokana ianao, dia manamboara sy mampiditra azy fotsiny.
Azonao atao ny mijery ny fivoaran'ny prospect anao amin'ny fotoana tena izy - misokatra ny fisoratana anarana, tsindrio, fizarana ara-tsosialy ary misoratra anarana.
Moosend: Fanamafisana tarihin'ny data
Ny personalization dia iray amin'ireo teny matetika ampiasaina loatra amin'ny automatisation marketing. Moosend personalization tsy manavao ny saha manokana ao anatin'ny atiny mailaka fotsiny, afaka mampiditra fanoloran-kevitra mifototra amin'ny toetr'andro, vokatra manokana ary koa mametraka ny faharanitan-tsaina artifisialy hampiasaina amin'ny alàlan'ny fanolorana vokatra mifototra amin'ny fihetsiky ny mpitsidika anao sy ny mety fividianany. Ny fizarana ao anatin'ny Moosend dia mivelatra mihoatra ny mailaka, pejy fipetrahana ary endrika.
Moosend dia manana API mahery matanjaka, manolotra endrika famandrihana WordPress, azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny SMTP, manana plugin Zapier, ary taonina CMS, CRM, Validation List, Ecommerce, ary Lead Generation integrations.
Misoratra anarana maimaim-poana amin'ny Moosend
Fanambarana: mpiara-miasa amiko aho Moosend ary mampiasa rohy miasa ao amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: kalesy fiantsenana nilaozanaautomatiqueCS-ny hovidianamailaka tsy fivadihan'ny mpanjifahisintona ary mandatsaka tonian-dahatsoratraautomatique ecommercemarketing marketingmpanamboatra mailakamailaka Marketingsehatra marketing amin'ny mailakampamatsy tolotra mailakaESPmpanamboatra endrikatonian-dahatsoratry ny pejymagentoautomation marketingfivezivezena amin'ny marketingMoosendopencartPrestaShopThriveCartwoocommercefomba fahandro momba ny workflowZen ny hovidiana